OGEYSIIS:Shirka Somaliland ee Ka Dhacaya Washington DC May 20-21keeda 2016 |
OGEYSIIS:Shirka Somaliland ee Ka Dhacaya Washington DC May 20-21keeda 2016
Shirka Somaliland oo ka furmaya Washington DC nawaaxigeeda Jimcaha iyo Sabtida soo socota ee bisha May 20-keeda iyo 21keeda waxa lagu qabanayaa Hilton Dulles Airport. Macluumaadka waxad ka helaysaa web siteka www.somalilandconference.com, waftigii qaranka Somaliland-na way yimaadeen.
Shirku wuxu furmayaa maalinta jimcaha 9ka subaxnimo wuxu soconayaa illaa 5ta galabnimo. Habeenimada jimcaha waxa Hotelka Hilton Dulles Airport ka jirta xafladii May 18 oo bilaabmi doonta sagaalka habeenimo illaa iyo Kowda; waxa ka qudbadaynaya madaxda qaranka, xaflada waxa ka heesaya Abdijibar Khaliji iyo Nimco Degan oo ka timi UK. Xaflada May 18keeda ee habeenka Jimcaha lagu qabanayo Hilton Dulles Airport waa bilaash oo lacag lagu soo geli maayo.
Maalinta labaad ee shirka oo ah Sabtia, May 21st, shirku wuxu bilaabmayaa 9ka subaxnimo illaa 5ta galabnimo. Habeenimada Sabtida waxa Hotelka Hilton Dulles Airport ka jirta xafladii xidhitaanka shirku waxay bilaabmi doonta sagaalka habeenimo illaa labada subaxnimo, xaflada xidhitaanka waxa ka heesaya Abdijibar Khaliji iyo Nimco Degan. Xaflada Sabtida lagu qabanayo Hilton Dulles Airport waa bilaash oo lacag lagu soo geli maayo.
Fadlan ka soo qayb gal 25-guurada May 18th 2016, dabaal dega labada habeen ee May 20-21 waa bilaash oo wax lacag ah lagu geli maayo.